Wikipedia:Maqaalka Cusub Bogga Hore/0 - Wikipedia
Wikipedia:Maqaalka Cusub Bogga Hore/0
Dawlad Federaal ah ama dawlad midow ah Ama dawlad dhexe waa qaab ka mid ah qaabka dawladnimo, waxayna ka dhalataa midow ay midoobeen gobollo ama degmooyin ama dawlado wada nool iyagoon kala go´in, dawladii ugu horeeysay ee caalamka samaysaty habka Federalka waxa ay ahayd Maraykanka markii ay ka xuroobayeen Ingiriiska waxaa isku tagay markii ugu horeysay 13 gobol 1787, 2 sano kadib waxaa la sameeyey dastuur federal ah dawladdaasna waxaa madax ka noqday Giorge washington.
Habka Federaalka Federaalnimadu waa hab dasturi ah oo Dawladda dhexe oo kor ka matasha waxayna leedahay awoodeeda sharci dajineed , fulinta iyo maxkamadaheeda. Laakiin gudaha waxa ay noqonayaan gobollo kala madax banaan, sida caadiga ah waxaa dhacaysa awoodaha in ay kala qaybsadaan dawlada dhaxe iyo gobolada hab dasturi ah.
Waxa ayna noqonaysaa sidaan soo socota:
1 In la xadido aoowda maamul goboleedyeda ee looga dambeeyo Dawlada Federaalka ah
2 in Dawlada awoodeeda la yareeyo ee loo daayo goboloda maamulkooda
3 in loo daayo dastuurka waxa uu qabo.
Soomaaliya iyo Federaalka Horta oraahda ah Federaal lagu dhaqmo waxaa ugu horeeysay ee afkiisa laga maqlo madaxwaynihii hore ee Soomaaliya 2004-2008 Cabdullahi yuusuf axmedee lagusoo doortay shirkii embegati ee ka dhacay kiinya oktober 2004 tii asigoo ka helaya gacan madax ay saaxiibo yihiin haba ugu horeeyee Melle zenawi, kadibna waxa uu ku guuleeystay in Dawladda lagu magacaabo Dawlad federaal ah "TFG" Dowladda federalka isla markaana kumeel gaar ah.
Waxaa asigana ku xigay oo mar labaad kor uqaaday Dawlad kasta ee dhalataa in ay qaadato nidaamka Federaalka ah ninka lagu magacaabo Md C/raxmaan Faroole ee ah Madaxa maamulka Puntland. (SII AQRI)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Maqaalka_Cusub_Bogga_Hore/0&oldid=116241"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 9 May 2013, marka ee eheed 00:07.